चन्द्रमामा जान गर्लफ्रेन्डको खोजीमा अर्बपति – Online Marg
सोमबार ,माघ ६ २०७६
चन्द्रमामा जान गर्लफ्रेन्डको खोजीमा अर्बपति
Posted on Tuesday, January 14th, 2020 2:23 PM Tuesday, January 14th, 2020 2:25 PM by अनलाइनमार्ग डट कम डेस्क
अन्तरिक्ष यात्राका लागि जापानी अर्बपति युसाकु मेइजावाले महिला साथीको खोजीको विज्ञापन गरेका छन् । उनले साथी मात्रै खोजेको नभई अन्तरिक्ष यात्राका लागि महत्वपूर्ण साथी खोजेको मेइजावाको वेबसाइट प्रवद्र्धन अभियानमा उल्लेख गरिएको छ ।
“मेइजावाको लामो समयदेखि अन्तरिक्षमा जाने सपना रहेको छ,” वेबसाइटले उल्लेख गरेको छ । “उनले कोही विशेष मानिससँग विशेष स्थानमा जाने इच्छा व्यक्त गरेका छन्,” वेबसाइटले भनेको छ ।
मेइजावा र उनको नयाँ साथीले स्पेसएक्सको नयाँ पुस्ताको स्टारसिप रकेटबाट चन्द्रमाको यात्रा गर्नेछन् । यो स्पेसक्राफ्टले धेरै मानिसलाई चन्द्र र मंगल ग्रहको यात्रामा लैजाने छ । २०१८ को सेप्टेम्बरमा मेइजाले ठूलै आकारको डिपोजिट गरेको स्पेसएक्सले जनाएको छ ।
उनले स्टारसिपमा पहिलो निजी ग्राहक हुनका लागि यस किसिमको डिपोजिट गरेका हुन् । -एजेन्सीको सहयोगमा
Posted in विचित्र मार्गTagged #चन्द्रमा
बैंक खातामा एक्कासी ३ करोड डलर देखिएपछि…
अमेरिकाको टेक्सास निवासी एक महिला एक दिनका लागि करोडपति बनिन् । ब�
जब दुई अनुहार देखेर मानिसहरुले राक्षस भने…
एकजना मानिसको दुईवटा मुहार थियो । टाउको यस्तो थियो कि अगाडीको भाग�
कलियुगको चर्तिकलाः छोराका लागि ल्याईएकी बुहारी आफ्नै बाबुले श्रीमती बनाइदिएपछि…
के हुन्छ होला जब छोराका लागी आएकी दुलहीसँग उसका ससुराले विवाह गर्�
अब प्रहरीमा भर्ना हुन भर्जिनिटी जाँचपास हुनुपर्ने, पुरुषले नै जाँच्छन् यसरी भर्जिनिटी !
सुन्दा पनि आश्र्चर्य लाग्छ, प्रहरीमा भर्ती हुन भर्जिनिटी चाँचपास
‘ब्रा’ लगाएको भेडा विश्वभरी भाइरल, यस्तो रहेछ कारण !
विशेष गरी महिलाका लागि नभइ नहुने भित्रि बस्त्र ‘ब्रा’ भेडालाई पनि
पेट दुखेर अस्पताल पुगेका पुरुषको जब गर्भवती भएको रिपोर्ट आयो !
हामीले महिलाहरु गर्भवती भएको कुरा त थाहा पाई नै राखेका छौँ । र देखि
बिबाह गर्न केटा नपाएको भन्दै काठमाडौकै यी केटीहरुले गरे सामूहिक विज्ञापन (सम्पर्क नम्बरसहित)
पछिल्ला दिनहरुमा जीवनभर साथ दिने व्यक्ति खोज्न पनि विज्ञापन गर्न�
अब मरेका मान्छेलाई पनि पुनः जिउँदो बनाउन सकिने
के डाक्टरले एक व्यक्तिको टाउँको अर्को व्यक्तिको शरीरमा फिट गर्न स
पुरुषले बच्चा जन्माएपछि…
बिश्वमा हामिले पत्याउनै गाह्रो पर्ने अनेक घटना सुन्दै आएका छौ । ग�
सपनामा मरेका मानिस देखिनुको अर्थ के हो ? थाहा पाउदा चकित पर्नुहुनेछ !
जीवन र मरण जीवनको सबभन्दा ठूलो सत्य हो । जन्मिने मान्छे मर्नैपर्छ �
पासवर्ड बिना सजिलै यसरि खोल्न मिल्छ अरुको फेसबुक, हेर्नुहोस !
साँढेको यौ’न उत्तेजना बढाउने औषधी मान्छेले खाईदिएपछि…
अबको केही घण्टापछि मौन अवधि सुरु, के गर्न हुन्छ के गर्न हुदैँन ?
लक्ष्मणको नाचौँ नाचौं लाग्ने गीत ‘मायालु रापाकोट’ बजारमा, दर्शकले दिए बबाल प्रतिक्रिया ! (हेर्नुहोस् भिडियो)
अब नेता–कार्यकर्ताका लागि पनि बन्यो यस्तो कडा नियम !
आस्था राउतलाई ज्योती मगरले दिईन् दह्रो साथ, उठाईन गम्भीर प्रश्न !
ट्राफिक प्रहरीले जब प्रहरीकै गाडीमा ‘ह्विल लक’ लगायो !
अन्ततः आस्था राउतबारे पशुपतिले मुख खोले, दिए कडा दनक ! (भिडियोसहित)
उपसभामुख तुम्बाहाङफेद्धारा राजिनाको घोषणा
आस्था राउत समातिने पक्का भएपछि चर्चित गायक प्रमोद खरेलले दिए कडा अभिव्यक्ती, फेसबुकमा खैलाबैला !